TTSweet: အော်ဇီ မှာ ကြုံရသမျှ ...
Posted by T T Sweet at 8:21 AM
really nice to read your experiences.. waiting for more.. :)
evergreen April 21, 2011 at 11:07 AM
Very interested to read your sharing. And I love your using ဂျာ ဂျာ .... :)
အစ်မ ရေးထားတာလေးဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုခံစားရတယ်.. အရေးအသားကောင်းတယ်.. အော်စီအတွေ့အကြုံတွေကို ဆက်ရေးပါဦးလို့
ဖိုးတုတ် April 21, 2011 at 11:31 AM
ဖတ်လို.ကောင်းတယ်ဗျို. ၊ ဆစ်ဒနီမြို.တော့ ဒုက္ခပါပဲ ၊ မြို.အတင်းကိုတုတ်မဲ့ စင်ကာပူက နာမည်ကြီးတဲ့ ဘလော့ဂါအသစ်စက်စက် ရောက်နေလေရဲ့ ၊ ခွိခွိ
ဗဟုသုတရတယ်ဗျို. ၊ ဆစ်ဒနီမြို.ကို အလည်တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်ချင်ပါရဲ့ ၊
နောက်မှ တစ်ခေါက်လာပြီး ကွန်မန်.ရေးပါဦးမယ် ၊ ရုံးအလုပ်မလုပ်သေးပဲ ရုံးက ကွန်ပြူတာကိုဖွင့်ပြီး မဆွိရဲ့ ပို.စ်ကိုဖတ်ပြီး ကွန်မန်.တွေခိုးရေးနေတာ ...
အားလုံးအဆင်ပြေတာသိရလို.၀မ်းသာပါတယ် ၊ ဂျူးဂျူးကျောင်းတက်ရင် မဆွိ ပိုပျင်းနေလိမ့်မယ်၊ ပျင်းပျင်းနဲ.ပို.စ်တွေရေးပေါ့ ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘလော့တွေကိုလျောက်လည်ပေါ့ ၊ ဘလော့ဂါတွေလည်း များလာလိုက်တာ၊ အရာရာ ရှားပါးနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ပေါနေတာက ဘလော့ဂါတွေ ဖြစ်နေလေရဲ့ ၊ တစ်နေ.ကုန်လျောက်လည်တာတောင် ဘလော့အစုံကိုရောက်မယ် မထင်ဖူး ၊
MrDBA April 21, 2011 at 12:36 PM
Mon Petit Avatar April 21, 2011 at 12:49 PM
"ကိုယ်အရောက်မြန်ပေလို့ပဲ။ ဦးခြိမ့်မှာ အိမ်ရှင်မပဲ လိုတော့တာဗျားး))"
It is very refreshing to read all of your posts and this particular sentence makes my day, Ma Ma Sweet!!!!
shin April 21, 2011 at 1:23 PM
စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ နှာခေါင်းရှည်ရှည်နဲအဖြူတွေလို့ဖတ်ရတော့ ငယ်ငယ်ကဗုံလေးတီးလိုက်ရင် နှာခေါင်းရှည်ထွက်လာတဲ့ ကာတွန်းလေးကိုသွားသတိရတယ်။ နေရာအသစ်မှာ အတွေ့အကြုံအသစ်ကလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ တိုးကြောင်လေး ဘူတာရုံကို ဓတ်ပုံရိုက်ပြပါအုံး။ မြင်ဖူးချင်လို့ပါ။
Andrew April 21, 2011 at 2:57 PM
တော်သေးတာပေါ့ ဦးခြိမ့်အိမ်ရှင်မအသစ်မဝယ်ခင် TTSweet ရောက်ပေလို. :D
အေးအေး သန့်သန့် တိတ်တိတ်လေး ဆိုတော့ တောင်ပေါ်မြို့လေးလို နေလို့တော့ ကောင်းမဲ့ပုံပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆူညံညံဒေသက ရောက်ခါစဆိုတော့ တော်တော်တော့ ပျင်းနေမှာပဲ။ ဂျူဂျူလေး ပျင်းနေမှာကိုပဲ သနားလိုက်တာ။ ကျောင်းမြန်မြန်ဖွင့်ပြီး ဘော်ဘော်တွေ ရရင်တော့ သူ ပျော်လာမှာပါ။ ကျောင်းဖွင့်တော့လည်း တီတီဆွိအတွက် ပျင်းစရာဖြစ်သွားရော။ ရာသီဥတုက အေးအေး၊ လူသူက တိတ်ဆိတ်နဲ့ အိမ်မှာ ခဏခဏ အိပ်ဖြစ်လို့ ကြာရင် တီတီဆွိကနေ တီတီဝဝကြီး ဖြစ်လာမလားပဲ။ :p သြော်ဇီ ၂၈၀ ဆို မနည်းဘူး။ နှမြောလိုက်တာ။ ဂျူဂျူသိရင်တော့ သူ့ရိက္ခာတွေအတွက် ဝမ်းနည်းနေမလားပဲ။ ဒီလူတွေ တော်တော်ဆိုးပဲ။ အကုန်ပါးစပ်ဟခိုင်းပြီး တစ်တောင့်စီ ပစ်ထည့် မြည်းခိုင်းရမှာ။ ပြီးမှ ကြိုက်တယ် ကြိုက်တယ် ဖြစ်သွားမယ်။
Anonymous April 21, 2011 at 9:57 PM
အစ်မရေ အော်ဇီအတွေ့ အကြုံလေးတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူး
Rita April 21, 2011 at 11:12 PM
ဂျူဂျူက အဖော်ရတဲ့ သမီးကလေးပဲ။ =)
wei thet April 21, 2011 at 11:32 PM
တော်သေးတာပေါ့ ဦးခြိမ့်အိမ်ရှင်မအသစ်မဝယ်ခင် TTSweet ရောက်ပေလို. Lol
Anonymous April 22, 2011 at 12:31 AM
waiting for next post........
Anonymous April 22, 2011 at 1:30 AM
ဒီမှာတော့ နွေရောက်စဆိုတော့ ၁၁-၁၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကို သမီးတွေကပျော်လွန်းလို့ ကြိုးတချောင်းအကျီတွေနဲ့ အပြင်မှာ လမ်းသလားနေကြပြီ။ အစ်မတို့လဲ နောက်ဆို နေသားကျသွားမှာပါ။
ဒီမှာလည်း မီးဆိုမှိန်မှိန်လေးတွေပဲထွန်းကြတယ်.. ဒါမှ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိတာတဲ့..လင်းတဲ့မီးချောင်းရောင်တွေက အေးစက်စက်နဲ့မို့လုိ့တဲ့...
I think milk, cheese, butter, ice cream, chocolate e.t.c. will be very cheap and tasty. Please mind your weigh ... for me I can't control with such things...:)
Anonymous April 22, 2011 at 3:09 AM
အမလည်း အိမ်မှာ ကြာကြာနေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ... အလုပ်ထဲရောက်သွားမှာပါ ... အော်စီရဲ. Mechanical Engineer ဘ၀ကို သိချင်ပါတယ် ... အမ မရေးခင် ဦးခြိမ့်ကို အချိန်ရရင် ရေးပါအုံးလို.။
ဒီမှာလဲ တူတူပဲ..။ လမ်းမီးတွေမထွန်းတာ.. ဘာလို့လဲမသိဘူးနော်။ချွေတာတာလားမသိဘူး။ အမေ့ရွာလို မှောင်မဲနေပေမယ့်.. အိမ်မှာက အမေ့အိမ်လို လူမများတော့ ... ခြောက်ခြားစရာ.. တိတ်ဆိတ်နေတာ.. မနေတတ်တာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ရှေ့မှာ ကိုယ်.. မီးလုံးတစ်လုံးထွန်းထားလိုက်တယ်။ သတ်တိ..ခဲ။
တန်ခူး April 22, 2011 at 11:29 AM
သူငယ်ချင်းရေ... ဆွိရေးထားတာလေး ဖတ်ရတာရော ပုံလေးတွေကြည့်ရတာရော အတော်ငြိမ်းချမ်းတာပဲ... နောက်ဆို ပန်းပင်လေးတွေမျိုးစုံစိုက်လို့ ရပြီ...ဂျူးလေးမေမေ့ကို ကူညီနေတာချစ်စရာလေးဟယ်..ဆက်ရေးပါဦးနော်
Anonymous April 22, 2011 at 12:46 PM
သက်ဝေ April 22, 2011 at 12:48 PM
ပျော်စရာကြီး.. သစ်ပင်စိုက်စရာ မြေနေရာတွေအများကြီးဆိုတော့ သူငယ်ချင်းနဲ့ အကိုက်ပဲ...း))
ပျင်းရင် စာတွေ အများးးကြီးးးး ရေးနော်...
Facebook ကိုလည်း လာပြီး ဓါတ်ပုံတွေ update လုပ်ပါအုံး...
*** ဟိုအပင်လေးက အရွက်အသစ်တွေ ထွက်လာပြီ...
Heartmuseum April 22, 2011 at 1:58 PM
Ah Ma, R u sure u arrive on time to Auze. Ko Chaint might get an extra အိမ်ရှင်မ :lol :P
ခနွဲ April 22, 2011 at 3:05 PM
အစ်မရေ..carpet ပေါ်ကို ဖြူးရတဲ့အမှုန့်ရှိပါတယ်။ carpet powder လို့ခေါ်ပါတယ်။ အနံ့သင်းသင်းလေး။ အဲဒါကို အရင်ဖြူး၊ ပြီးရင် Vacuum cleaner နဲ့ ထိုးလိုက်ရင်..အစ်မပြောတဲ့ ခပ်အောက်အောက် အနံ့မျိုး မရတော့ပါဘူး။
ဟိုအပေါ်က အမည်မသိက လမ်းတွေမှာ ဘာလို့မီးမထွန်းလဲမသိဘူး ဆိုလို့၊
သြဇီတို့၊ အမေ၇ိကားတို့က..တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အရ ဧရိယာကျယ်ပြီး၊ လူနေမှုကျဲတဲ့အတွက်..သူတို့ဆီက တစ်မြို့စာလောက်ပဲ ရှိတဲ့ စင်ကာပူလို နေရာတိုင်း မီးထိန်ထိန် မထွန်းနိုင်ပါဘူး။ စီးတီးကောင်ဆယ်တွေရဲ့ ဘတ်ဂျက်ကလဲ ရှိသေးတယ်လေ။ ဒါပေမယ့်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ..လိုအပ်သလို.(မှုခင်းကျူးလွန်ဖို့လွယ်တဲ့ ကားပတ်ကင်နေရာတွေ) မီးထိန်နေအောင်ထွန်းထားတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Shinlay April 23, 2011 at 12:35 AM
အတွေ့ အကြုံလေးတွေဖတ်ရတာစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ပုံရိပ် April 23, 2011 at 1:20 PM
မဆွိတီရေ သားအမိသားအဖတွေ အတွေ့အကြုံသစ်က ပျော်စရာ၊ ရင်ခုန်စရာပေါ့။ အမေရိက နိုင်ငံကြီးမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ ခင်ည။ နောက်တော့လည်း နေသားကျသွားမှာပါ။
(အရင် ခဏခဏ လာဖတ်ဖူးပါတယ်။ မှတ်ချက်သိပ်မရေးဖြစ်တာပါ။)
FYI, you can get the bigger size bottle of Aung Tagun (Buu Gyi). Instructions, ingredients, expiry date, etc are described in English as well.
ဆုမြတ်မိုး April 24, 2011 at 1:03 AM
တီဆွိရယ် လာဖတ်သွားပါတယ်..ဆက်ရေးပါဦးနော်...း) ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုပဲ အရမ်းကောင်းတာပဲ
Evy April 24, 2011 at 3:06 PM
အတွေ့အကြုံလေးတွေလာဖတ်သွားတယ် တီဆွိရေ။ ခုတော့ ပျင်းချိန်ရဦးမယ် မထင်ဘူးနော်။
ဆူးသစ် April 24, 2011 at 3:10 PM
မရောက်တာကြာလို့ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်အစ်မရေ။ ဘ၀ဆိုတာ ဒါပဲလားမသိပါဘူး။ တလောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တော့ သူလည်း အော်ဇီကို ရွှေ့တော့မှာတဲ့။ သူ့မိန်းမက အရင်တောင်ရောက်နေတာတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆို တို့တွေ အင်္ဂါဂြိုဟ်တောင် ရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့တောင်တွေးမိသေးတယ်။ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ကိုး။
Anonymous April 25, 2011 at 11:53 AM
အစ်မရေ....ဘာကြောင့်ရယ်မသိ ဖတ်ပြီးတော့ တိတ်တိတ်လေးဝမ်းနည်းနေမိတယ်.... နောက်တော့ အသားကျသွားမှာပါ... ကျားယို...ကျားယို....
T T Sweet April 29, 2011 at 5:55 AM
အန်တီဆွိလဲ အသစ်စက်စက် အိမ်ရှင်မဘ၀မှာ အလုပ်တွေ ရှုပ်၊ အထုပ်တွေရှင်းနေလို့ ဘလော့ဂ်မပြောနဲ့ ကွန့်မန့်လေးတွေ တောင် ပြန်မရေးဖြစ်ဘူး။ အားလုံး တောင်းပန်ပါတယ်။
အောက်ဆုံးက အနောနိမတ်စ်က စလုံးက အသိနဲ့တူတယ်နော်။
ဟုတ်တယ် ဆူးသစ်ရေ ... နောက်ဒီ့ထက် ထပ်ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ဂါဂြိုလ်ပဲ သွားရတော့မယ် .. တကယ်း)
Evy ရေ ... တကယ်ကို ပျင်းချိန်မရတာပါ ... လောလောဆည် အွန်လိုင်းကိုမတက်နိူင်အောင် အလုပ်များနေလို့ ခုမှ ကွန့်မန့်တွေ ပြန်ရေးနိူင်တာသာကြည့်ပါတော့။
ဆုမြတ် ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုဖြစ်အောင် လာလည်လေ ...။ ဒီကလဲ ရေးမှာပါ ... အရှည်ကြီးကို ရေးဦး ... မှာ။
Anonymous. We will try next time အောင်တံခွန် ဗူးကြီး။ Thanks for sharing. We didn't know about that.
အနောက်နီူင်ှု့တွေမှာ နေသူတွေအတွက်ကတော့ အဒါတွေက အထူးအဆန်းတွေ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ ကိုယ်ကသာ ထူးဆန်းနေတာ ..း)
ရှင်လေး ၊ ခနွဲ... ပို့စ်တင်တိုင်း အမြဲလာဖတ်တာ ကျေးဇူးနော်။
carpet power ဆိုတာ ၀ယ်သုံးကြည့်မယ်။ အနံ့က အိမ်ထဲမှာ ကြာသွားရင်တော့ ယဉ်သွားရော။ အိမ်တံခါးဖွင့် ၀င်လိုက်ရင်တော့ ထောင်းကနဲပဲ။ Thanks for sharing.
အန်တီဆွိ မရောက်ခင်ထိ ဦးခြိမ့် အိမ်ရှင်မ မရသေးတာ သေချာပါတယ်ကွယ်။ ဘာလို့ သိလဲ မမေးနဲ့ ... အသေသတ် ... ပြောဘူးး))
ဟင်းချက်ရတာနဲ့ အိမ်အလုပ်တွေနဲ့တင် အန်တီသက်ဝေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ချာချာလည်နေသေးလို့ အပင်တွေဖက်မလှည့်နိုင်သေးဘူးဂျာ။ နေသားကျသွားရင်တော့ စိုက်မှာပါ ... စိုက်မှာပါ။ အဲဒီက ပန်းလေးတွေပွင့်လာရင် အကြောင်းကြားဦးနော်။
T T Sweet April 29, 2011 at 6:19 AM
စိုက်မှာပါ ... ဖြေးဖြေးပေါ့နော်။ အိမ်ကို ခဏခဏလာလည်တဲ့ ငါ့ညီမကို သတိရနေပါတယ်။ ဒီမှာ အဲလိုလာလည်မဲ့ ညီမလေးတွေ ရှိသေးဘူးး(
သစ်ပင်လေးတွေ စိုက်ရတော့မှာဆိုတော့ တို့လဲ ပျော်နေပါတယ်။ ဖြေးဖြေးကျရင် စိုက်ဖြစ်မှာပါ။ ဂျူးဂျူးတစ်ခါတစ်ရဲလဲ အဲလိုပဲ လိမ္မာတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံလဲ ဆိုးချင်တယ်။ ရောက်စမှို့ အလိုလိုက်ထားရတယ် တန်ခူးရေ။ သားသားလေးကိုလဲ သတိရပါကြောင်းနော်။
မီးမထွန်းတာကတော့ နိူင်ငံကကျယ်လွန်းတော့ နေရာတိုင်း မထွန်းတာ ချွေတာတာပါတဲ့ကွယ်။ အောက်က အနောနိမတ်စ်ြ တစ်ယောက်ပန်ဖြေထားတာ ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။
လောလောဆည်တော့ ပျင်းချိန်မရသေးဘူး။ အိမ်အလုပ်တွေနဲ့ နားကိုမနားရလို့ အရင် အလုပ်လုပ်တုံးကမှ နားရသေးလို့ တွေးမိနေပါတယ်။ မက်ကယ်နီကယ်အင်ဂျင်နီယာ ဘ၀ ဘယ်တော့ ပြန်ရောက်မလဲ ကိုယ်တိုင်လဲ မသိသေးပါဘူး။ ပိတ်ကားပေါ်မှာ ဘ၀စာမျက်နှာပေါ်မှာပဲ ဆက်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
ဟုတ်တယ် ဒီမှာ ချိစ်တွေ ချောကလက်တွေကတော့ ပေါတယ်။ စလုံးမှာထက်လဲ ပိုစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်အလုပ်တွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုများတော့ ၀ိတ်က ကျသွားတယ်ဗျား။
စူးနွယ်လေး၊ နှင်း အနောနိမတ်စ်များနဲ့ ရီတာ
လာလည် လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါဂျာ။ နောက်လဲ လာဖတ်ပါဦး။
ရယ်ရတယ်။ တစ်တောင့်စီ ပစ်ထည့်ဆိုတော့း)
လောလောဆည်တော့ ၄ကေဂျီကျနေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မသိဘူး။ အော်ဇီ ၂၈၀ အလကားနေရင်းပေးရတာဆိုတော့ နှမြောတာပေါ့။ အဟင့်...
ပေါက်၊ ရှင်း၊ Andrew
တိုးကြောင်ကလေး ဘူတာ ကြည့်ချင်ရင် အောက်ကလင့်လေးကို နှိပ်ကြည့်နော်။ ကိုယ်တိုင်တော့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ရသေးဘူး။
T T Sweet April 29, 2011 at 6:30 AM
စာလေးတွေ ရေးချင်အောင် အမြဲ အားပေးစကားလေးတွေ ပြောတတ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲလိုလူတွေရှိမှလဲ ဘလော့ဂ်ရေးသူတွေ စာရေးသူတွေက အားရှိတာပါ။
ကိုဇက်ကိုလဲ အမြဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပို့စ်ရေးလိုက်တိုင်း တက်တက်ကျွကျွနဲ့ ကွန့်မန့်လေးတွေ လာလာရေးပေးတာ။ တခြား ဘလော့တွေမှာလဲ တွေ့နေရတော့ မဆွိတီကတော့ ကိုဇက်ကို နာမည်ပေးလိုက်ပြီ ... တိုးကြောင်ကလေးဘူတာ ... အဲလေ ... ကွန်းမန့်ကင်း ( comment king) လို့ ...း))
လောလောဆည်တော့ ပျင်းဖို့ အချိန်မရသေးပါလူးဂျာ။ အပေါ်က ပြန်ထားတဲ့ ကွန့်မန့်တွေသာ ဖတ်ကြည့်ပါတော့။ repeat မလုပ်တော့ဘူးနော်။
ဖြူ ၊ evergreen
Thanks alot for your encouragement. I got strength to post for new experience.
Maung Pho May 1, 2011 at 3:07 AM
Same to you . Aunty Sweet. I also Mechanical Engineer worked in Singapore for6years and migrated to Perth with family. Not like Singapore. I don't know where to go or visit on holidays. Very quiet and silent in Perth, too. Very boring!
naythawtar August 11, 2011 at 5:34 PM
တီတီဆွိရေ .. ကျူးပစ်က နေသော်တာ တယောက် အခုမှပဲ တီတီဆွိ ဘလော့ကိုတွေ့ ပီးဖတ်နေမိတာ လုံးဝမထွက်နိုင်ဘူး ..
တီတီဆွိရေ .. "သူတို့ နိူင်ငံက မျိုးကောင်းမျိုးသန့် သစ်ပင်တွေကို တခြားနေရာက မျိုးတွေ ရောယှက်၊ မျိုးကူးမှာ ကြောက်တယ်ဆိုပါတယ်။" ဆိုလို့ ကြုံတုံးပြောလိုက်ဦးမယ်..
ကျွန်တော်လဲ ချဉ်ပေါင်စိ ပေးမသယ်ရကောင်းလား လူပါးဝလှချည်လားဆိုပြီး စိတ်အကြီး အကျယ်ဆိုးဘူးတာပေါ့.. ရှင်မတောင် သနတ်ခါးတုံးလဲ ဆုံးဘူးသပေါ့..
ဒါပေမယ့် ကျောင်းမှာ environmental science ယူရချိန်မှာ နားလည်သွားတယ် ၊ အပြင်က ၀င်လာတဲ့အကောင် ပလောင်တွေ အပင်တွေက မျိုးပွားရင် native species တွေနဲ့ မျိုးစပ်ရင်.. native species တွေကို မျိုးတုံးပြစ်လိုက်ရင် အဲ့ဒီအပင်တွေအကောင်တွေကို မှီခိုနေတဲ့ ecosystem တခုလုံး ပါထိမှာပါ. ecosystem ထိခိုက်ရင် ရာသီဥတုပါ ထိခိုက်မှာတဲ့ တီတီဆွိရေ .....
ကျွန်တော်တော့ဖြင့် ချဉ်ပေါင်ရွက်ခြောက်သာ အိမ်ကနာနာမှာစားနေရတယ်...
T T Sweet August 12, 2011 at 9:55 AM
ရောက်လာပြီလား။ ကျူးပစ်မှာတော့ ရင်းနှီးနေတာ ကြာပါပြီ.။ ဒါပေမဲ့ မ၀ငတစ်ချက်၊ ၀င်တစ်ချက်နဲ့ ပျောက်နေတာ ကြာပြီပဲကို။ အော်ဇီမှာဆို ဘယ်အရပ်မှာနေတာလဲ။ နိူင်ငံကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ ဒီလို ကန့်သတ်ချက်တွေထားရှိတာ လက်ခံပါတယ်။ နေသော်တာပြောမှ ဒီကိစ္စ ထင်ထားတာထက်ကို ပို serious ဖြစ်ပါလားလို့ သဘောပေါက်ပါတယ်။ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မနေသော်တာရေ့။
ချဉ်ပေါင်တော့ တကယ်ငတ်တယ်။ အခြောက်က လုံးဝခံစားလို့မရဘူး။
naythawtar August 12, 2011 at 8:03 PM
.နေသော်တာက ကနေဒါကပါ.. ဒါပေသိ ဒါမျိုး ဒုက္ခတွေရိုးးး ဟိုးးး ဟိုးးး နေတာကြောင့်ပါ ..
ချဉ်ပေါင် အစိုကို နေနဲနဲပြပြီးတော့ ကြော်ပီး ဆီပြန်စစ် ပြီးလို့ ရှိရင် ဆီသေသေချာချာ စစ်ပြီးတော့ ပလတ်စတစ် အိတ်နဲ့ အထပ်ထပ်ထုတ် ပို့ ခိုင်း ကြည့် ပေါ့ တီတီဆွိရေ..
ဂျူဂျူလေးရော အနားရပြီလား. ကျူရှင်တွေတော့ မယူရတော့ဘူးတူရဲ့ 